Home Wararka Beesha caalamka oo ku wajahan Jubbaland & aqoonsi buuxana siisay Axmad Madoobe
Beesha caalamka oo ku wajahan Jubbaland & aqoonsi buuxana siisay Axmad Madoobe
Waxaa la filayaa in dhawaan magaalada Kismaanyo ay Tagaan wafdi balaaran oo ka socda beesha caalamka kuwaas oo kulamo kala duwan la qaadan doona hogaanka dowlad goboleedka Jubbaland.
Waa markii ugu horeeysay oo wafdi noocaas ah tagaan intii la doortay madaxweyne Axmad Maxamed Islam (Ahamed Madoobe). Tani ayaana Daliil cad u ah in beesha caalamka ay si buuxda u aqoonsanahay hogaanka iyo maanulka dowlad goboleedka Jubbaland.
MW Farmaajo oo in mudo isku dayaayay in uu dafaro ama uu ka hortago doorashada Axmad Madoobe ayaa meel cidla ah ku soo dhacay isaga oo aan gacan ku haynin maamulkii Jubbaland isla markaana cadaawad ka samaystay shacabka reer Jubbaland.
Kheyre iyo Farmaajo ayaa ku fashilmay talaabo kastaa oo ay qaadeeen, gaar ahaan qorshayaasha lagu burburniyay dowlad goboleedyada.